Idizayini Yandisa iTraffic 25%
Ukuvakasha okungama-25% selokhu kwenziwa kabusha
NgoLwesine, Februwari 10, 2011 NgoMgqibelo, Okthoba 29, 2011 Douglas Karr
Asikabi nayo namanje Martech Zone ngendlela ebesingathanda ngayo, kepha umklamo omusha ube yimpumelelo enkulu. Traffic esizeni has inyuke ngaphezu kwama-25% nge ukubukwa kwamakhasi ngaphezulu kuka-30%. Lokho akubandakanyi ithrafikhi eyengeziwe esihlangabezana nayo encwadini yethu yezindaba entsha yamasonto onke (bhalisa ngenhla).
Idizayini ihlale iphansiwe njengendlela yoku ukwandisa traffic kusayithi lakho. Abantu abangeke basebenzise imali kumklamo omuhle cishe bahlala bephikisana nami mayelana nokutshala imali ekwakhiweni kobuchwepheshe. Akunjalo nje.
Idizayini enhle ingukutshalwa kwemali okuhle enkampanini yakho. Umngani wethu, uCarla Dawson (4 Izinja Design), yakhelwe lokhu kuphindaphindwa kwebhulogi. Ngicele okuthile okuhlanzeke ngokuphelele okufaka uphawu. Senze izinguquko ezimbalwa selokhu sethula, kepha isakhiwo esihlanzekile, nesicacile yilokho ebesikade sikulandela.
Siphinde safaka Isithonjana se-WordPress's Post kusifanekiso sethu sokubhuloga futhi kungezwe plugin ukukhiqiza ngokuzenzakalela isithonjana sokuthunyelwe kusuka esithombeni sokuqala kokuthunyelwe kwebhulogi. Ngale ndlela bekungafanele ngiqeqeshe wonke ama-blogger ukuthi asisebenzisa kanjani lesi sici.
Futhi, ingqikithi ifaka izikhangiso ezinamandla ezisuselwa esigabeni sokuthunyelwe kwebhulogi noma amakhasi wesigaba esikhulu. Uma ungakawahloli okwamanje, ungabona isigaba ngasinye sethu esiyinhloko ku-navigation enkulu: Ama-Analytics, ukubhuloga, imeyili Marketing, Ukukhangisa Kwamaselula, Ukucinga Engine Marketing, Social Media Marketing futhi Ubuchwepheshe.
Ngemuva kokuthi singakaze sibe nomxhasi osemthethweni phambilini, sesivele sivale uxhaso olu-2 futhi! I-Emailium uxhasa okuthunyelwe kwethu kwe-imeyili Marketing futhi GetApp uxhasa okuthunyelwe kwethu kwezobuchwepheshe! Kubongwa okukhethekile iSocket ngohlelo oluhle lokuphathwa kwezikhangiso.
Ungakubukeli phansi ukutshalwa kwezimali kumklamo omusha. Ngingathanda ukukutshela ukuthi konke kumayelana nokuqukethwe - kepha iqiniso yindlela okuqukethwe okwakheke futhi kwaboniswa ngayo kubaluleke kangako.
Bamba Izinkampani Zilandise
I-SEO ayami ngeSayithi Lakho
Indaba enkulu yempumelelo! Ngithanda umklamo omusha ngendlela.
Ngiyabonga Brandon! Okuningi usendleleni!
Ngisajwayela ukubukeka okusha, ngoba nganginethezekile lapho izinto zazikhona. Kepha njengoba, izivakashi ezingama-75% zivame ukuba zintsha, kubaluleke kakhulu ukuthi izivakashi ezintsha zithande isayithi, futhi ngokuya ngezinombolo zakho abazenzayo ngokusobala!
Njengamanje sisebenza ekwakhiweni kabusha kwesiza sethu: http://www.roundpeg.biz futhi sizobe sibheka ngokuningiliziwe izinguquko zakho ukuze ubone ukuthi yini esingayifunda kuwe.